TAROM dia mamerina ny sidina Budapest mankany Bucharest miala ny seranam-piaramanidina Budapest
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » TAROM dia mamerina ny sidina Budapest mankany Bucharest miala ny seranam-piaramanidina Budapest
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana Hongria • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Romania • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny seranam-piaramanidina Budapest dia miarahaba ny serivisy intelo isan-kerinandro an'i TAROM mankany Bucharest, Romania ny rohy farany ahafahana miverina amin'ny tambajotram-pifandraisana.
TAROM dia mandefa serivisy intelo isan-kerinandro any Bucharest avy any Budapest
TAROM dia mampiasa ATR72 misy seza 72 amin'ny zotra Budapest-Bucharest
Budapest dia afaka manolotra sidina mankany amin'ny foibe ara-barotra any Romania
Raha mbola manohy ny lalan'ny fanokafana ireo tambajotram-pifamoivoizana ny seranam-piaramanidina Budapest, ny rohy farany ahafahana miverina soa aman-tsara dia MeridianaSerivisy intelo isan-kerinandro any Bucharest.
Amin'ny alàlan'ny fiaramanidin'ny ATR72 misy seza 72 ao amin'ny sehatra 616 kilometatra, Budapest dia afaka manolotra sidina mankany amin'ny foibe ara-barotra any Romania.
“Mahafinaritra fa miverina manolotra sidina mankany an-drenivohitr'i Romania ny TAROM,” entin'i Balázs Bogáts, Lehiben'ny Fampandrosoana Airline, Seranam-piaramanidina Budapest.
“Rehefa manomboka mihamora ny fameperana ny dia, manatrika ny fitomboan'ny fangatahana amin'ireo toeran-kaleha fantatra ny tambajotranay izahay. Faly izahay miara-miasa amin'ireo mpiara-miasa amin'ny kaompaniam-pitaterana anay hivondrona amin'ireo toerana rehetra nifandraisanay taloha, ao anatin'ny tontolo azo antoka sy azo antoka. ”
TAROM no mpitatitra saina sy zotram-piaramanidina tranainy indrindra any Romania ankehitriny, miorina ao Otopeni akaikin'i Bucharest. Ny foibeny sy ny foibeny dia ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Henri Coandă.